Izindaba - Sino-Dental® 2021 Exhibitor Manual & Exhibiton Amafomu
Njengombukiso wamazinyo omkhulu kunabo bonke waseChina, iSino-Dental® sekuwumbukiso wamazinyo wokulinganisa, ojabulela idumela eliphezulu eChina nase-Asia ezungezile. Kuze kube ngu-2019, ibibanjwe ngempumelelo iminyaka engama-24. Eminyakeni engamashumi amabili edlule, iSino-Dental ilwele ukwethula nokukhuthaza ubuchwepheshe nemikhiqizo esezingeni eliphezulu; ukuhlinzeka ngenkundla yezinkampani zamazinyo zikazwelonke nezamazwe omhlaba ezizokhombisa izithombe, zaziswe ngemininingwane yezimakethe, zifunde ubuchwepheshe obuthuthukisiwe futhi zenze imikhiqizo emisha; ukuhlinzeka ngamathuba kubakhombisi nabachwepheshe bokuxhumana kanye nokushintshana ngamava.
I-Sino-Dental® bekulokhu kuyipulatifomu yebhizinisi ekahle kunazo zonke yokubambisana kwebhizinisi kanye nokuhlola okungaba khona emakethe. Iningi labakhombisi emhlabeni wonke manje selibheka iSino-Dental® njengokukhetha kwabo okokuqala eChina ukwethulwa kwemikhiqizo emisha.
Ngo-2020, indawo ephelele yombukiso izoba ngamamitha skwele angama-5,000 namadokodo angaphezu kuka-2,000 esewonke. Ababonisi abangaphezu kuka-800 abavela emazweni nezifunda ezingama-30 (njengeChina, iJalimane, iJapane, iKorea, i-USA, iSingapore, iBrazil, i-Italy, iFrance, i-UK, iSwitzerland, iSweden, iHong Kong, iTaiwan kanye nokunye) bazobe bethula imikhiqizo yabo futhi insiza. Izinkampani ezivela eJalimane, e-USA, eJapane, eKorea, eBrazil naseSwitzerland zizobe zihambela njengamaNational Pavilions. Ubuchwepheshe nemikhiqizo yobuchwepheshe besimanje, kanye nemikhiqizo emihle kakhulu yaseChina enamanani aphansi nensizakalo, konke kuzokhonjiswa kule nkundla.
Ngaphandle kokubukisa okuhle kwemikhiqizo nobuchwepheshe obethulwe ngababonisi, kuzobanjwa izingqungquthela ezingaphezu kwama-300 ezisezingeni eliphakeme kanye nemihlangano yokucobelelana ngolwazi ngesikhathi sombukiso wokwethula ukuthuthukiswa okuthuthuke kakhulu kwezemfundo nobuchwepheshe ekufakweni kwamazinyo.
I-Sino-Dental® isibe yisixazululo sokuma okukodwa kubathengisi ekuthengeni umkhiqizo. I-International Dealers 'Lounge izovulwa kusukela ngo-10: 00-16: 00 ngoJuni 9-11, eklanyelwe ngokukhethekile ukwenza abenzi bamazinyo abakhulu baseChina bethule imikhiqizo nezinsizakalo zakamuva kanye nokunikeza ithuba elihle lokwakha ubambiswano lwebhizinisi lomhlaba jikelele. Sikhuthaza izivakashi ukuthi zimeme abathengisi nabathengisi bamanye amazwe eSino-Dental® ngokunikeza indawo yokuhlala yamahhala phakathi noJuni 8-12 kulowo ongamema iqembu lama-20.
Siyakwamukela ku-Sino-Dental® 2021, lotawubanjwa ngaJuni, 2021 eChina National Convention Centre (CNCC) • eBeijing.
Usuku Lombukiso: UJun 9-12, 2021
Indawo: I-China National Convention Center (CNCC), eBeijing
Ngemisebenzi yombukiso, sicela uthinte ikomidi elihlelayo:
UNksz Carol KANG (Umxhumanisi Oyinhloko), UNks Taylor XIN (Insizakalo Yepavilion), UNks Ying MA (Insizakalo Yomkhangiso)
I-imeyili: info@sinodent.com.cn / sino-dental@qq.com
Ucingo: + 86-10-88393917 / 3883/3850
Ifeksi: + 86-10-88393924